दिनेश गौतम काठमाडौं, १९ चैत
जहाँ इच्छा, त्यहाँ उपाय । असम्भव केही पनि छैन । यतिबेला कोरोना भाइरस (कोभिड- १९)ले विश्व नै सङ्कटमा छ । के त्यसो भए केही नगरी बस्ने त ? मानिस जन्मनु, मर्नु शाश्वत नियम हो । सङ्कट पर्‍यो भनेर केही नगरी बस्ने होइन । जहाँ हो, त्यहीँ बसेर केही गर्ने हो ।
कोरोना संक्रमणका कारण नेपालमा पनि लकडाउन गरियो । विद्यालय र विश्वविद्यालय पनि बन्द भए । लाखौँ विद्यार्थीको पठनपाठन रोकियो ।
तर, नेपालभन्दा धेरै कोरोना प्रभावित देशमा कक्षा कोठा बन्द भए पनि पठनपाठन र परीक्षा रोकिएको छैन । उनीहरूले अनलाइनबाट पठनपाठन र परीक्षा संचालन गरिरहेका छन् । त्यति मात्र होइन, अरू देशका विश्वविद्यालय यतिबेला कोरोनाको अध्ययन र अनुसन्धानमा पनि जुटेका छन् । तर, हाम्रो देशका विश्वविद्यालयहरूको ल्याबमा ताला लागेको छ । यो विडम्बना हो ।
नेपालकै काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ एजुकेसनले भने स्नातकोत्तर, एमफिल र पीएचडीको कक्षा रोकेको छैन । अनलाइनबाटै पढाइरहेको छ ।
के नेपालमा पनि अनलाइन कक्षा सम्भव छ ? कसरी पढाइ हुन्छ ? केयूले अनलाइनबाट कसरी पढाउँछ ? कक्षा कोठामा पढ्दा र अनलाइनबाट पढ्दा के फरक हुन्छ ?
यिनै जिज्ञासा हामीले काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्रोफेसर बालचन्द्र लुइँटेललाई राखेका छौँ । उनीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत छ ।
पृथ्वीमा मानिसको विकास भएदेखि नै कुनै न कुनै प्रकारको महामारी झेल्दै आएका छौँ । कुनै समय स्पेनिस फ्ल्लुले मान्छे मरे । कहिले सार्स भाइरस त कहिले इबोलाले । अहिले कोरोना भाइरस (कोभिड- १९)ले विश्व नै आतङ्कित भएको छ ।
यसअघि २०७२ सालको भूकम्प हाम्रै आँखामा छ । त्यतिबेला घरभित्र बस्न सक्ने अवस्था थिएन । अहिले घरभित्र बस्न सकिन्छ । विद्यालय, विश्वविद्यालयमा सम्पूर्ण पठनपाठन बन्द भएको छ । पठनपाठन बन्द गर्नुपर्छ भन्ने एउटा पक्ष छ । अर्को पक्ष पठनपाठन रोकिनुहुँदैन भन्ने छ ।
कोरोनाका कारण रिस्क धेरै छ । तर, नदेखिएका रिस्क हरेक दिन हुन्छन् । हामी रिस्की समाजमा बसेका छौ । त्यसो भए रिस्क छ भनेर केही नगरी बस्ने हो ? यो समयमा पनि केही न केही गर्न सकिन्छ, गरिरहनुपर्छ ।
यो समयमा डिस्ट्यान्स लर्निङ गर्न सकिन्छ । विश्वमा नै चलेको लर्निङ हो यो । त्यसैले काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ एजुकेसनले अनलाइनबाट कक्षा चलाइरहेको छ ।
यसरी हुन्छ अनलाइन कक्षा
विश्वविद्यालय नियमित चलिरहँदा पनि अनलाइन पढाइ भई नै रहेको थियो । सन् २०११ बाट नै सुरु भएको हो तर सन् २०१३ मा नर्वेजियन संस्थाको सहयोगमा काम अगाडि बढेको हो ।
लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम (मुडल)बाट अनलाइन पढाउन थालेका हौँ । यसका लागि पैसा पर्दैन । मुडलमा कोर्स बनाएर राखेको हुन्छ । मुडलबाट नै डिस्टेन्स लर्निङ गर्ने हो । अहिले मुडलको एप पनि छ । डाउनलोड गर्न सकिन्छ । त्यहाँ कोर्स राखिएको हुन्छ । जहाँ हो, त्यहीँ बसेर पढ्न र पढाउन सकिन्छ । मुडलमा पाठ्यसामग्री पनि राखिएको हुन्छ ।
कुनै पनि विषयमा प्रश्न दिएर विद्यार्थीले त्यहीँ उत्तर दिन र छलफल गर्न सक्छन् । भिडियो, अडियो र च्याटबाट छलफल गर्न सक्छन् । भिडियो, अडियो रेकर्ड पनि हुन्छ । पछि आवश्यक परेमा फेरि हेर्न, सुन्न सकिन्छ ।
मुडलमा राखिएको हरेक कोर्षमा ४-५ वटा युनिट हुन्छन् । क्रिएटिभ कोर्स छ । मास्टर्स, एमफिल र पीएचडीका कोर्स छन् । ४ वटा विषयका ७५ देखि ८० वटा कोर्स राखिएको छ । पहिलेदेखि नै यो हामीले प्रयोग गरेका थियौँ तर कोरोनाको प्रकोपपछि लकडाउन भयो । त्यसपछि भिडियो पनि सुरु गरेका हौँ ।
कक्षा कोठाको भन्दा राम्रो गर्न सकिन्छ
अनलाइन डिस्टेन्स सजिलो पनि छैन । कक्षा कोठामा जे गर्छौं, त्यो गर्न सकिँदैन । तर, फरक र राम्रो गर्ने ठाउँ पनि छ । पहिले दरबार हाइस्कुलको शिक्षण सिकाइ जस्तो थियो, अहिले पनि त्यसैगरी चलिरहेका छौँ । दुनियाँमा धेरै परिवर्तन भइसक्यो । सिकाइका लागि जति नयाँ कोर्स ल्याए पनि टेक्नोलोजी पुरानो भयो भने के काम ? टेक्नोलोजीसँगै सिकाइमा पनि परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ ।
परम्पराबाट माथि उठ्न सकेनौँ
विश्वविद्यालयमा धनीका छोराछोरीलाई पढाउँछौँ । राम्रो गर्ने हो भने अनलाइनबाट गाउँका दूरदराजमा पनि पढाउन सकिन्छ । जहाँ पुग्न सकिएको छैन, त्यहाँ पुग्न सकिन्छ । जहाँ गए पनि सिकाइ हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । मात्र इन्टरनेटको कनेक्टिभिटी भने हुनुपर्छ ।
हामी परम्परामा बाँँधिएका छौँ । कक्षामा पढाएको मात्र राम्रो हुन्छ भन्ने पनि होइन । कक्षामा शिक्षक ३ घण्टा के गरेर बसेको छ, के थाहा हुन्छ ? कक्षामा एकछिन अनुहार देखाउँदा पढाइ भएको मान्छौँ । यसको मतलब अनलाइन मात्र राम्रो भन्न खोजिएको होइन । नराम्रो पनि त्यतिकै छ । अनलाइन राम्रो हुने चान्स पनि छ । राज्यले सबै स्कुलमा इन्टरनेट पुर्‍याउने हो भने हामी अनलाइनबट जुनसुकै विद्यालयमा पनि पढाउन तयार छौँ ।
केयूले कसरी पढाउँछ ?
गुगलबाट एजुकेसन डोमेन पाइन्छ । गुगलबाट विश्वविद्यालयले डोमेन लिएकाे छ । त्यहीबाट अनलाइन कक्षा चलाउने हाे ।
अहिले हामीले चलाएको कक्षामा विद्यार्थी ९० प्रतिशत प्रेजेन्ट छन् । रेगुलर कक्षामा पनि १-२ जना नआउने हुन्छन् । यो नेपालका लागि प्रयोग गर्ने उत्तम समय हो ।
यदि लकडाउन लामो समय भयो भने के गर्ने ? पठनपाठन बन्द नै गरेर बस्ने ? अहिले मात्र होइन, यस्ता प्रकोप भोलिका दिनमा पनि आउन सक्छन् । त्यसैले अहिलेदेखि नै डिस्टेन्स लर्निङ सुरु गर्नुपर्छ ।
एकै पटक २ सय ५० जनालाई पढाउन सकिन्छ
अहिले २ सय ५० जना एकै पटक अनलाइनमा आएर पढ्न सक्छन् । तर, १५ देखि २० जनाको ग्रुप राम्रो हुन्छ । यसको राम्रो पक्ष के हो भने कक्षामा नबोल्ने पनि अनलाइनमा बोल्ने हुन्छन् । भिडियो देखाउनुपर्छ भन्ने पनि छैन । शरीर देखाउन मन नभएकाले अडियो मात्र प्रयोग गर्न सक्छन् ।
तर, कक्षामा बोलेन भने पनि बडीबाट थाहा हुन्छ । अनलाइनमा भने त्यो थाहा हुँदैन । बोल्नै पर्ने वा लेख्नै पर्ने हुन्छ । अनलाइनमा सबै एकै पटक बोल्न मिल्दैन । पालैपालो बोल्नुपर्ने हुन्छ । अनलाइनबाट राम्रो सिकाइ भएको छ । विद्यर्थीमा प्रोग्रेस भएको छ । नयाँनयाँ कुराको खोज हुन्छ ।
इमर्जेन्सीमा पनि पढाउन सकिन्छ, सरकारले सोच्नुपर्छ
सरकारले यस विषयमा सोच्ने बेला आएको छ । अहिलेदेखि नै म्यानेज गर्‍यो भने भोलि जस्तोसुकै इमर्जेन्सीमा पनि काम लाग्छ । जो जहाँ छ, त्यहीँ बसेर कसरी पढाउने हो ? अब सरकारले सोच्नुपर्छ । यसको योजना बनाउनुपर्छ ।
पढाइ लेखाइ कक्षा कोठमा सीमित राख्नुहुँदैन
अब पढाइ लेखाइ कक्षा कोठामा सीमित राख्नुहुँदैन । भएको टेक्नोलोजीलाई प्रयोग गर्नुपर्छ । ल्याबचाहिँ १८औँ शताब्दीको, टेक्नोलोजीचाहिँ २१औँ शताब्दीको राखेर शिक्षामा सुधार आउँदैन । एजुकेसनमा हिप्नोटाइज भएको छ । अब यसबाट बाहिर आउनुपर्छ । यो उत्तम समय हो । जहाँ गए पनि सिकाइको वातावरण बनाउनुपर्छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत १९, २०७६, १८:१७:००
#काेराेना त्रास #अनलाईन कक्षा